New – Page3– Muslim Book
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ့်ဘူလါမြို့ရဲ့ဗလီအီမာမ်ဆပ် ဗလီရှေ့မှာ အသတ်ခံရ
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ့်ဘူလါမြို့ရဲ့ဗလီအီမာမ်ဆပ် ဗလီရှေ့မှာ အသတ်ခံရ إنا لله وانا اليه راجعون ပုံမှာပါသော မော်လဝီဆပ်က ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ့်ဘူလါမြို့ရဲ့ဗလီအီမာမ်ဆပ်ပါ။ ဒီမောင်လာနာဆပ်ကို ဗလီရှေ့မှာ ရှာဟီးဒ်လုပ်လိုက်တယ်။ ဘယ်သူတွေ သတ်ပြီးးရှာဟီးဒ်လုပ်လိုက်တာကို ခုထိတရားခံမပေါ်ဘူး။ ညီကိုမောင်နှမများ မိမိရဲ့ဒိုအာမှာ ဒီဆရာရဲ့ မဂ်ဖွေရသ်အတွက်သတိရပေးကြပါ။ အမြန်ဆုံးတရားခံပေါ်ပါစေ အာမီးန်။ ပုံမှာပါသော မော်လဝီဆပ်က ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ့်ဘူလါမြို့ရဲ့ဗလီအီမာမ်ဆပ်ပါ။ ဒီမောင်လာနာဆပ်ကို ဗလီရှေ့မှာ
အီမန်ရှင်မွတ်ဆလင်များအတွက် မားမားမတ်မတ်ရပ်တည်ပြီး ကမ္ဘာကိုစိန်ခေါခဲ့သူ တူရကီ နိုင်ငံ၏ သမ္မတကြီးအာဒိုဂန်၏ အမှာစကား….
Mohamed Rahin | June 18, 2020
အီမန်ရှင်မွတ်ဆလင်များအတွက် မားမားမတ်မတ်ရပ်တည်ပြီး ကမ္ဘာကိုစိန်ခေါခဲ့သူ တူရကီ နိုင်ငံ၏ သမ္မတကြီးအာဒိုဂန်၏ အမှာစကား…. ဒွန္နယာ မှ ကမ္ဘာ တခုလုံးမှ နေထိုင်နေကြတဲ့ အီမာန်ရှင် မွစ်လမန်တိုင်းဟာ ကျွန်ပ် ၏နှလုံးသါးထဲက(ဒရ်ကန်) ရင်ခုန်သံဖြစ်တယ်။ တမန်တော်မြတ်ကြီး (ဆွ )အမိန့်ရှိတော်မူတယ်။ဟိုကမ္ဘာ အနောက် အဖျားမှနေထိုင်နေကြတဲ့မွစ်လင်မ်တဦး အခက်အခဲဒုက္ခနဲရင်ဆိုင်နေရသည်။ ကမ္ဘာအရှေ့အဖျားမှရှိတဲ့မွစ်လင်မ်ကကြားသိခဲ့ ရင် နှလုံးသါးထဲ၌နာကျင်မြှုဖစ်ရလိမ့်မယ်။ ၎င်းသူတွေအတွက်ဒိုအာပြုပေးကြရလိမ်မယ်။ ဒါမှသာလျှင်တမန်တော်၏အွမ္မသ်ပီသပါလိမ့်မယ်။
ဘဂ်လားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံရှိ အရဗီအတက်တန်းကျောင်းတော်ကြီး၏ ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီး ရှိုင်ခွလ်ဟာဒီးစ် အာလ်လမာ ဟဇရသ် မော်လနာ အီဒီရီးစ် (ရဟ်) Allah အသျှင်မြတ်သခင်၏ အမိန့်တော်ခံယူ…..
Mohamed Rahin | May 28, 2020
ဘဂ်လားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံရှိ အရဗီအတက်တန်းကျောင်းတော်ကြီး၏ ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီး ရှိုင်ခွလ်ဟာဒီးစ် အာလ်လမာ ဟဇရသ် မော်လနာ အီဒီရီးစ် (ရဟ်) Allah အသျှင်မြတ်သခင်၏ အမိန့်တော်ခံယူ….. موت العالم موت العالم إنا لله وانا اليه راجعون الهم اغفر له وارحمه واسكنه وادخله في
ဂုဏ်ယူစရာကာင်းတဲ့ ဒေါက်တာစလ်မာန်း……. အာဖဂန်နိုင်ငံ ကဘူးလ်မြို့ ဆေးရုံလက်ထောက်ဆရာဝန် စလ်မာန်းမို့အ်မင် သည် ကိုရိုနာကြောင့်Lockdownမိနေတဲ့သူများကိုမိမိကိုယ်ပိုင်ငွေကြေးဖြင့် အစားစာပစ္စည်းအများပြားကို လာရောက်ပို့ပေးခဲ့ပါတယ်။ Drစလ်မာန်းသည် ယခုလို မာန်မာနမရှိပဲသူဆင်းရဲများကို Drဂုဏ်နဲ့ မိမိကိုယ်တိုင် သွားရောက် ပေးကမ်းလှူဒါန်းခဲ့တဲ့မွန်မြတ်တဲ့ စိတ်ထားရှိကြောင်းကိုCovid community က heroအဖြစ်ဂုဏ်ယူခဲ့ပါတယ်။ ထို့အပြင် မိမိဆေးရုံတွင်လည်းFever လူနာများကိုလည်း စေတနာအပြည့်နှင့်ကူညီပြီး ကုသပေးခဲ့လေသည်။ လူအများချစ်ခင်ခံရသောမိမိDrဂုဏ်က်ိုမကြည့်ပဲ သူဆင်းရဲများနှင့်အတူပျော်ရွင်ပါဝင်
အိန္ဒိယသဗ်လိဂ်ဂျမာအသ်သား ၃၅၀ Covid-19 ပျောက်ကင်းပြီးနောက် ကိုရိုနာလူနာများအတွက် သွေးရည်ကြည်လှူဒါန်းရန် အသင့်ဖြစ်နေ….
Mohamed Rahin | April 29, 2020
အိန္ဒိယသဗ်လိဂ်ဂျမာအသ်သား ၃၅၀ Covid-19 ပျောက်ကင်းပြီးနောက် ကိုရိုနာလူနာများအတွက် သွေးရည်ကြည်လှူဒါန်းရန် အသင့်ဖြစ်နေ…. ပြီးခဲ့သည့်လက ဒေလီမြို့ နေဇာမွတ်ဒီန်သို့ လာရောက်ခဲ့သည့် သဗ်လိဂ်ဂျမာအသ်အဖွဲ့ဝင် ၃၅၀ ခန့်သည် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါခံစားခဲ့ရပြီးနောက် ပြန်လည်ပျောက်ကင်းလာကြသည်။ အဆိုပါဂျမာအသ်သားများက ဒေလီမြို့တွင်း၌ ပြင်းထန်စွာဖျားနာနေသောလူနာများအားကုသရန် ၎င်းတို့ ၏သွေးရည်ကြည် လှူဒါန်းရန်သဘောတူခဲ့ကြသည်။ ယခုအချိန်အထိ၎င်းတို့အနက် ၂၅ ဦးသည် ပလာစမာသွေးရည်ကြည်ကုထုံးအတွက် သွေးလှူဒါန်းခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ကျန်းမာရေးဌာနမှ
အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ရဲအရာရှိတဦး လမြတ်ရမဒွါန်တွင်း Lockdown အခြေအနေမှာ ရိုဇာဖြင့် ရရှိတဲ့နေရာမှာပဲ နာမဇ်ဝတ်ပြုခဲ့ပုံ……..
အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ရဲအရာရှိတဦး လမြတ်ရမဒွါန်တွင်း Lockdown အခြေအနေမှာ ရိုဇာဖြင့် ရရှိတဲ့နေရာမှာပဲ နာမဇ်ဝတ်ပြုခဲ့ပုံ…….. အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ရဲအရာရှိတဦးဟာ လမြတ်ရမဒွါန်တွင်း Lockdown အခြေအနေမှာ ရိုဇာဖြင့် ရရှိတဲ့နေရာမှာပဲ နာမဇ်ဝတ်ပြုခဲ့ပုံပါ။ Masha_Allah အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ရဲအရာရှိတဦးဟာ လမြတ်ရမဒွါန်တွင်း Lockdown အခြေအနေမှာ ရိုဇာဖြင့် ရရှိတဲ့နေရာမှာပဲ နာမဇ်ဝတ်ပြုခဲ့ပုံပါ။ Masha_Allah Credit, Htike
ကိုဗစ်-၁၉ ကို ကုသရာမှာ အထောက်အကူဖြစ်တဲ့သွေးရည်ကြည်လှူပြီး ဆေးရုံကထွက်လာတဲ့သဗ်လီးဂ်ဂျမသ်က လူများကိုလက်ခုပ်ဿဘြာပေးပြီး ဂုဏ်ပြုနှုတ်ဆက်…….
Mohamed Rahin | April 28, 2020
ကိုဗစ်-၁၉ ကို ကုသရာမှာ အထောက်အကူဖြစ်တဲ့သွေးရည်ကြည်လှူပြီး ဆေးရုံကထွက်လာတဲ့သဗ်လီးဂ်ဂျမသ်က လူများကိုလက်ခုပ်ဿဘြာပေးပြီး ဂုဏ်ပြုနှုတ်ဆက်……. ကိုဗစ်-၁၉ ကို ကုသရာမှာ အထောက်အကူဖြစ်တဲ့သွေးရည်ကြည်လှူပြီး ဆေးရုံကထွက်လာတဲ့သဗ်လီးဂ်ဂျမသ်က လူများကို အိန္ဒိယဆေးရုံကဆရာဝန်၊နာစ်နဲ့ ဆေးရုံဝန်ထမ်းများက လက်ခုပ်ဿဘြာပေးပြီး ဂုဏ်ပြုနှုတ်ဆက်နေတာပါ။ Credit UNICODE ကိုဗဈ-၁၉ ကို ကုသရာမှာ အထောကျအကူဖွဈတဲ့သှေးရညျကွညျလှူပွီး ဆေးရုံကထှကျလာတဲ့သဗျလီးဂျဂမြသျက လူမြားကိုလကျခုပျဿဘွာပေးပွီး ဂုဏျပွုနှုတျဆကျ……. ကိုဗဈ-၁၉ ကို
ကြယ်တပွင့်ကြွေလွင့်ခဲ့ရ……. အလ်ဟာဂ်ျ မော်လာနာ ကာရီ အိရ်ဖွါးန် ဆွာဟိဗ် ၏ ဂျနာဇဟ်ကို မနေ့က နေ့လယ် ၂ နာရီခန့်တွင် ရေးဝေးစွန္နီကဗရ်စသာန်၌ ဟဇရသ် မော်လာနာ မွဖ်သီ အိဒ်ရီးစ် ဆွာဟိဗ်မှ ဦးဆောင်ကာ ဂျနာဇဟ်ဆွလားသ် ဝတ်ပြုခဲ့ပြီး ဒဖန်ပြီးစီးသွားပါကြောင်းအသိပေးအပ်ပါသည်။့  ကွယ်လွန်သူ ဆရာသခင်အတွက် လူကြီးမင်းတို့၏ ဒိုအာများတွင် သတိရပေးကြပါရန်
မွတ်စ်လင်မ်သွေးလှူ ရှင်များကွန်ယက်(မြစ်ကြီးနား) မှ လယ်ကုန်းရပ်ကွက်ရှိ မိသားစု ၁၀၀ အားဆန် ဆီ ပဲများကိုအိမ်တိုင်ရာရောက် သွားရောက်ဝေငှ
Mohamed Rahin | April 14, 2020
မွတ်စ်လင်မ်သွေးလှူ ရှင်များကွန်ယက်(မြစ်ကြီးနား) မှ လယ်ကုန်းရပ်ကွက်ရှိ မိသားစု ၁၀၀ အားဆန် ဆီ ပဲများကိုအိမ်တိုင်ရာရောက် သွားရောက်ဝေငှ 13.4 2020 ယနေ့ည 7နာရီခန့်မှစ၍တွင် ကျွန်တော်တို့မွတ်စ်လင်မ်သွေးကွန်ယက်နှင့်အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များလှူဒါန်းမှုပထမအကြိမ်အဖြစ်လယ်ကုန်းရပ်ကွက်ရှိ မိသားစု ၁၀၀ အားဆန် ဆီ ပဲများကိုအိမ်တိုင်ရာရောက် သွားရောက်ဝေငှပေးခဲ့ပါသည် (အစိုးရ၏ဝေငှမှုနှင့် ကျွန်တော်တို့အရင်အလှူရှင်များ၏ဝေငှမှုများတွင်မရရှိခဲ့သောမိသားစုများအားနယ်ခံမိတ်ဆွေများ၏ကူညီမှုဖြင့်လူမျိုးဘာသာမခွဲခြားဘဲဝေငှခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်)Inshallah ဆက်လက်၍လဲအမှန်တကယ်လိုအပ်သောမိသားစုများထံလူမျိုးဘာသာမခွဲခြားဘဲအိမ်တိုင်ရာရောက်သွားရောက်လှူဒါန်းပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည် အမှောင်ချိန်မှာ လိုအပ်နေတဲ့မိသားစုတွေထံ သူတို့ထင်မှတ်မထားဘဲ ရောက်ရှိလှူဒါန်းမှုအတွက်
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဗန်ဒါအာဂျေမြို့တွင် စားဝတ်နေရေး ခက်ခဲသူများယူဆောင်ရန်အတွက် စားသောက်ကုန်များ ချထားပေးပုံ
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဗန်ဒါအာဂျေမြို့တွင် စားဝတ်နေရေး အကြပ်တည်းဖြစ်နေသူများ အသင့်ယူဆောင်ရန်အတွက် စားသောက်ကုန်များ ချထားပေးပုံ။ Aung Nwe Oo အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဗန်ဒါအာဂျေမြို့တွင် စားဝတ်နေရေး အကြပ်တည်းဖြစ်နေသူများ အသင့်ယူဆောင်ရန်အတွက် စားသောက်ကုန်များ ချထားပေးပုံ။ Aung Nwe Oo အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဗန်ဒါအာဂျေမြို့တွင် စားဝတ်နေရေး အကြပ်တည်းဖြစ်နေသူများ အသင့်ယူဆောင်ရန်အတွက် စားသောက်ကုန်များ ချထားပေးပုံ။ Aung